Ihowuliseyili Butterfly umnatha Umenzi kunye noMthengisi | Iigusha ezintathu
Umnatha webhabhathane owenziwe nge-HDPE eyomeleleyo kunye ne-UV izinzile, ivakalelwa ngakumbi njengelaphu elithambileyo lokuchukumisa kwaye liya kuhlala iminyaka emininzi. Ukukhanya ngokwaneleyo ukuze kungqengqeleka ngqo kwizityalo kwaye komelele ngokwaneleyo ukuba kungasetyenziselwa ukugubungela izakhelo, iikheyiji okanye iihupula.
Isebenza njengesithintelo emzimbeni phakathi kwezityalo kunye namabhabhathane ebathintela ekubekeni amaqanda abo kwaye, imibungu itya izityalo.
Kwakhona luncedo ekukhuseleni amachibi ekungcolisweni kwezinto kunye neHerons.
Ubungakanani enemingxuma 6mmx6mm
Iphakheji: Ibhalwe okanye iqengqiwe ngeengxowa ze-PE.
Ngobubanzi obukhoyo be-4m, 6m, 8m kunye ne-12m ungazigquma ngokulula iikheyi ezinkulu kunye nolwakhiwo kwaye njengoko umnatha ulawuleka ngokulula uya kubamba ngaphezulu kwesakhelo semifuno okanye inkxaso yegadi.
→ i-6mm mesh encinci ngokwaneleyo ukugcina amabhabhathane
→ Yenziwe nge-100% ye-polyethylene
→ UV uzinze ubomi obude
→ Kulula ukuphatha
→ I-Drapes ngaphezulu kwezakhelo zokukhusela izityalo, iihupula kunye nolwakhiwo
→ Ukukhanya ngokwaneleyo ukubeka ngqo ngaphezulu kwezityalo
→ Inika ukhuseleko olongezelelweyo kwiintaka, kumdlalo wezilwanyana nakwizilwanyana zasekhaya
Ipharamitha yeeTheyibhile zeMveliso
Egqithileyo Umthunzi welaphu
Okulandelayo: I-ertyisi kunye neembotyi